Kala-bax; topology iyo qaabdhismeedka qaabdhismeedka - Geofumadas
Manifold; topology iyo qaabdhismeedka casriga ah
Luulyo, 2008 GIS kala cayncayn ah
Waxaan codsi kahelaa qof ku barta cilmiga joomatikada gudaha Argentina UTEM-ka Chile iyo borofisar ayaa u wakiishay hawl ku saabsan Manifold; marka waxaan fursad u siinayaa inaan wax ka qoro.
1. Manifold ma taageertaa topology?
Haa, si aad tan u sameyso waa inaad dhaqaajiso ikhtiyaarka tafatirka la wadaago "edit / edit edit"
Qaabkaan, waxyaabaha kujira unugyada wadaaga dareemayaasha si sax ah waxay ula jaan qaadi karaan xaafadooda. Loo adeegsaday labadaba canaanta iyo dib u habeynta walxaha gacanta.
Si aad u qeexdo saxitaanka, isla markiiba guji lakabka, dooro guryaha halkaasna waxaad ku tilmaami kartaa shuruudaha saxda ah ee lagu dabaqi karo labada qaybood ee kala ah 'snap and falanqaynta xayawaanka, nadiifinta topological' iyo "edit wadaag".
Tusaalaha aan tusinayo, hadaan haysto walxahan, xittaa hadii ay yihiin kuwa madax banaan, marka aan dhaqaajinayo wadnaha, dhamaan dhibcooyinka iskudarta iyo kuwa sida saxda ah loogu xushay lakabkan, way dhaqaaqi doonaan.
Haddii daabacaadda la wadaagi lahaa aysan firfircoonayn, taasi waxay noqon lahayd natiijada:
Waxay la mid tahay polygons, dhibco iyo silsilado xariijimo; Jid ahaan Manifold waxay taageertaa lakab leh seddexdan nooc ee walxaha adigoon u baahneyn inay ku kala baxaan lakabyo gaar ah.
Waxaa kale oo xiiso leh in la fahmo in tirooyinka ay ku jiri karaan lakabyo kaladuwan, illaa inta lagu muujiyey khariidad; Arrintaas awgeed, waxaad lahaan kartaa lakab leh xuduudo xeelado, qaab xariiq ah halka lakab kale uu leeyahay polygons. Xitaa dhamaadka marka laga hadlayo waxaa jiri kara noodhka qaab dhibco ah ... Waan ogahay, waa waalli in uusan ka jirin cadastre laakiin badanaa waxay ka dhacdaa nidaamyada biyaha halkaas oo ay ka jiraan matoorada iyo ceelasha. Taabashada tiirka ayaa wax ka beddeleysa shaygii kala duwanaa ee ku soo beegmay xilligan, illaa inta ay ku dhex shaqeynayaan isla aragtida (khariidada).
Tani waxay ahayd daciifnimadii ugu weyneyd ee noocyada 3x ee ArcView; GvSIG wuxuu taageeraa xakameynta topolojiga, Bentley wuxuu ku hirgaliyay codsi loogu talagalay cadastre loo yaqaan "Bentley Cadaster"
2. Waa maxay qaab-dhismeedka qaabeysan ee Manifold?
Waxaan ku dari doonaa oo keliya qiimaha nooca 32-bit, si aan uga bixiyo fikrad ah sida ay qiimeyaashu ugu dhaqmayaan sida ay u egtahay.
a) Manifold Shakhsi ahaaneed, waa nooca aasaasiga ah. $ 245
b) Manifold Professional Professional, marka lagu daro nooca Shakhsiga ah, waxaa ku jira functionally IMS. $ 295, liisanka waqtiga degdega ah ee noocaani waa $ 100
c) Manifold shirkad ganacsiWaxa kale oo ku jira helitaanka afka hooyo ee xog-ururinta DBMS, daabacaadda adeegsiga-badan ayaa sidoo kale lagu samayn karaa IBM DB / 2, Oracle, SQL Server 2005, SQL Server 2008 ("Katmai"), PostgreSQL / PostGIS, ESRI SDE ama xog-ururinta nooca shakhsiga ah. … Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah tafatirka feylasha qaab .e00 $ 395
d) Daabacaadda Maamulka Xogta Macluumaadka Manifold, noocaani waxaa ku jira astaamo maareyn macluumaad oo dheeraad ah oo loogu talagalay shirkadaha leh macluumaad fara badan iyo adeegsadeyaal; waxaa ka mid ah taageerada loogu talagalay IBM DB / 2, Oracle, SQL Server 2005, SQL Server 2008 iyo PostgreSQL / PostGIS, oo ay ku jiraan dufcadda loo diro Oracle. $ 795
Waxaa jira saddex kordhin, kuwaas oo si gooni ah loo iibsan karo ama xirmooyinka xulashada $ 225:
Qalabka Ganacsiga, waxaa ku jira aalado dhowr ah oo loogu talagalay maareynta xayawaanka, oo ay ku jiraan Warshadaha Topology, u beddelashada xogaha raster si loo sameeyo vector (iyo sidoo kale Arcscan) iyo nadiifinta topological) $ 95
Aaladda Geocoding (Qalabka loogu talagalay geocoding) $ 50
Aaladda dusha sare (aalado loogu talagalay maareynta dusha sare, astaamaha iyo animation 3D) $ 145
e) Universal Manifold, waa nooca Shirkadda iyo lagu daro saddexda kordhin ee kor lagu soo sheegay $ 575, nooca waqtiga degdega ah ee noocaan ayaa ku kacaya $ 225
f) Manifold ugu dambeyntii, waa nooca Maamulka Macluumaadka oo lagu daro saddexda kordhin $ 845
... caddeyn lama huraan ah; in laga guuro hal nooc loona gudbo mid kale, kaliya furayaasha firfircoonaanta ayaa la iibsadaa, waxay la micno tahay in nooc ka mid ah Manifold ay kujirto wax walba, dhaqdhaqaaqyo kaliya ayaa la iibsadaa iyadoo loo eegayo baahida.
3. Qaabka xogta 'Manifold GIS'?
Hillaac, su’aashan waa mid cakiran oo wax badan kama barto websaydhka Manifold.
Halkan waxaa ah isku xiraha qaabka shayga, ma aqaano haddii ay jiraan wax kale oo aanan dareemin inaan ka jawaabi karo su'aashan ... laakiin halkan wax kale ayaa jira.
ArcView Bentley Systems ESRI GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
Post Previous" Hore Sidoo kale waxaan haystaa nolol
Post Next MapBuilder is dhiibay ... mid kaleNext »
3 Jawaabo "Manifold; topology iyo qaab dhismeedka qaab
Ha ha Dabcan waxaa loola jeedaa in ay ahayd wanaagsan, saaxiib! Dib-u-noqoshada, macnaheedu waa inaad siisay macluumaad wanaagsan oo laga yaabo in loo baahdo hawl ama jaahwareer ah heerka fikradaha ee la caddeeyey.
Salaan ka soo Peru
Taasi waa "waad dhaaftay" Waxaan rajeynayaa inay la micno tahay inay fiicneyd
Paula Perez Iriarte isagu wuxuu leeyahay:
waad ku mahadsan tahay, dhab ahaantii waa dhacdaa